Tips Fa Eoropa Andrefana By Train In 2 Weeks | Save A Train
Home > Travel Europe > Tips Fa Eoropa Andrefana By Train In 2 Weeks
Hangorona ny sarintanin'i Eoropa ary nieritreritra izay haleha dia afaka ny ho nofy ratsy! Eny, indrindra raha ianareo rehetra efa nahazo dia tapa-bolana. Amin'ny kaontinanta samihafa toy izany sy ny manan-karena amin'ny kolontsaina, tapa-bolana dia afaka toa fohy loatra! Ary noho izany, fa angamba ny mizara tsara indrindra sy mitsidika faritra manokana isaky ny diany. Amin'izay ianao manome ny tenanao ampy fotoana sy ny habaka ny mankasitraka tanteraka ny zavatra firenena tsirairay dia manana ny hanaterana. Eoropa Andrefana lamasinina tsara toerana hanombohana, ary inona no fomba tsara mba handeha toy ny fiaran-dalamby!
Nahoana Aho no Tokony lamasinina Eoropa Andrefana?
fandehanana Eoropa Andrefana lamasinina traikefa tena tsara toy ny fifandraisana amin'ny alalan'ny rail dia mahafinaritra! Izany no mahatonga ny Eoropa Andrefana lamasinina traikefa iray mora vidy sy ny safidy mety ho fitsidihana ao amin'ny androm ny tapa-bolana. Ity vondrona ity dia tsara ny firenena fantatra amin'ny lova naroboka teo amin'ny tantara, kanto, ary tsy mampino trano! Ny sakafo no tena samihafa karazany fa ianao mahita azy saika tsy ho vita ny manohitra mihinana ny zava-drehetra izay tonga ny lalanao. Eoropa andrefana ny miavaka fomba fiainana maoderina dia handao anao tena nambabo raha very ny tenanao ao amin'ny nightlife sy ny fironana.
Ireto misy ny Top Picks izy mba hahafahanao manomboka.
Fantatra noho ny labiera, waffles, ary ny sôkôla, Belzika dia ampahany amin'ny Eoropa Andrefana By Train dalana, ary dia tsy misy farany ny toerana mahavariana hitsidika. Avy ny velona Pubs, tranombakoka maro, miavaka lakandrano fitsidihana ny be pitsiny maritrano, ity firenena ity dia manana be dia be ny hanaterana. Raha manapa-kevitra ny hitsidika Belzika fotsiny fa tsy mandeha manodidina, mitsidika ny firenena tora-pasika – izy ireo mahafinaritra!
Aiza no manomboka ny iray mihitsy aza? ny divay, ny nahandro na ny kanto? Ny hamiratra foana ny vehivavy frantsay? na ny mahafatifaty olona? maherin'ny 30 mpitsidika vahiny tapitrisa isan-taona, City fanazavana ny manolotra Travel traikefa tsy tahaka hafa. Nahoana raha manokana fotoana manadihady ny maro tranombakoka, trano fisakafoanana, ary fivarotana? Na afa-mandositra ny ambanivohitra, mankafy ny tora-pasika malaza frantsay, ary haka nankany hitsidika ny tendrombohitra tsara tarehy? Eny! A tombony anjara? Ny lalamby fifandraisana dia mahatalanjona! Ekeo Eoropa Andrefana lamasinina, ary ianao hahita izay isika dia miresaka momba ny!
Lyon Airport mankany Bordeaux Trains
Ny fanakatonana firenena Eoropa Andrefana By Train no Soisa
Nankany Soisa foana hevitra tsara. Nankany Soisa lamasinina dia na dia iray tsara kokoa. Tsy vitan'ny hoe Soisa fiaran-dalamby laharana ny tsara indrindra any Eoropa, izany ihany koa ny iray tamin'ireo Toerana mahafinaritra indrindra mba hitsidika firenena lamasinina. Soisa no an-trano ny sasany Eoropa indrindra farihy tsara tarehy, ny malaza indrindra mountaintop, ary sôkôla treats. Ny fahasamihafana ara-kolotsaina dia manaitra! maherin'ny 200 firenena, izany dia tena toerana izay manolotra fomba fijery vaovao sy traikefa eo amin'ny isan-joron'ny.
Eoropa Andrefana lamasinina traikefa efa teo amin'ny fitomboan'ny Eoropa Andrefana nandritra ny folo taona lasa. Rehefa avy nandinika ny zavatra vitsivitsy ihany no firenena avy amin'ny faritra izay tsy maintsy atolotra, fa tsy tena sarotra ny sary an-tsaina ny antony. Ny fifandraisana matetika sy azo antoka ho Travel mora kokoa sy mahomby, tena. Noho izany, dia izao fotsiny ka ho anao hanapa-kevitra izay ary rehefa handeha.
Use Vonjeo-A-Train au livre ny fiaran-dalamby amin'ny tapakila lafo tahan'ny. Mandehana any misy toerana mahatsiravina nesorina ny saram famandrihana! Fikarohana Eoropa Andrefana lamasinina Tsy mbola mora kokoa, ary miloka ireo tapa-bolana dia manidina avy!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwestern-europe-train%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)